I-Auto Like Instagram - I-Instagram Auto Like
Njengoba i-Instagram ithuthuka ekuboneni ukuxhumana okuzenzakalelayo nezinkampani ezibanikezayo, kufanele uzilungiselele ukuzama izinsizakalo eziningi ukuthola okulungele wena. Kepha ngenhlanhla, sikwenzele kona futhi nalu uhlu lwethu lwe-5 Instagram auto efana ne-bots ngo-2021:
Futhi manje, sekuyisikhathi sokubhekisisa uhlu lwethu lwama-bots angu-5 ahamba phambili e-Instagram auto liker ongawazama manje.
#2 - Faka
I-Instaboss iyisevisi yokuzenzekelayo yaseFrance ethi inikela ngokubonakala okwengeziwe nokuzibandakanya ngokwenza ngokuzenzakalela ukuthandwa nge-bot yabo. Yini ehlukanisa le nkampani, ukuzibophezela kwayo ukusekela abasebenzisi bayo ngamunye ekutholeni ababhalisile babo bokuqala abangu-1,000.
Kufika kuma-akhawunti angama-20 we-IG.
Ingxoxo ebukhoma iyatholakala ngosekelo oluqinisekisiwe phakathi namahora angama-24
23 Izindlela zika-2021Ungakuthola kanjani ukuthandwa okuningi ku-Instagram : Amathiphu angu-15 nezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili